Solo To Tokyo – JVMyanmar
Posted on 18/08/2017 30/09/2021 by JVM
Last July 18, I went to Japan as internship trip for about two weeks. As it was my very first trip to foreign country and as well asasolo trip, excitement and happiness were countless. Before you read my article, let me remind you the following. I used to be country girl grew up inarural area of Myanmar and back then the most developed place I knew was Yangon city where currently I am working. After reading my article, one might feel I am somewhat exaggerating about my experiences and feelings in Tokyo but they are, asamatter of fact, what I genuinely felt.
Limousine Bus Gate at Narita Airport Terminal 1
I arrived at the Narita airport in the early morning of July 19. Since I came out of the airport, I noticed the cleanliness and silence of Tokyo city. Though it was the summer time in Tokyo, relatively pleasant weather for me because I could feel less air pollution in Tokyo. Then, I boughtabus ticket from Limousine bus service to go to Unplan Kagurazaka hostel, the place where my boss has booked for me during my stay in Japan. As I started taking the bus, I noticed the punctuality of Japan. The bus showed up in the precise time and I arrived to the destination in the time almost as they mentioned. That explained the transportation in Japan is quite convenient with less possibility of traffic jam. Within the bus, there isanotice saying to be careful not even to leak the noise from the earphones. On the way, I started enjoying the breath taking scene of Tokyo and unique landmarks. Tokyo is one of the world’s iconic cities with the population of Tokyo metropolitan region is 36 million whereas the population of Tokyo prefecture is 14 million people. So, the city was seemed quite sophisticated and crowed with busy people. Strangely, I found no dogs on the road; where in Yangon, we can see stray dogs in almost roads. Another thing that I noticed is people can walk in relax on the sidewalks and that catched my attention cause in Yangon, many of the sidewalks are filled with street vendors and even private cars are parked often. So, people walk on the road and it is not relaxing at all and often dangerous.
Ground Floor of Unplan Kagurazaka Hostel
The hosteI stayed was surprisingly very clean. The decoration is quite neat and beautiful and rooms and bathrooms are seemed incredibly well designed to comfort. Hostel staffs were friendly too and went out of the best way to find out answers to any questions they were unsure of. Plus they speak impeccable English. There isacafé at the ground floor and on the upper floors are dormitory areas for visitors, most of the long-stay tenants were the foreigners from different countries like me. Each dormitory room consists of very clean and smell good bedsteads which is sufficient for maximum 14 persons. To my surprise, I didn’t hearasingle noise made by roommates during my two weeks stay there. The hostel served light breakfast, provided shower gels, shampoo, conditioner and even the hair dryers in every shower room. Shower rooms were also very clean and dining area was also quite wide and convenient as the fridge, microwave and other necessary kitchenware were provided. There was alsoalovely roof top patio where you can chill with your own foods and beverage. There were many interesting social events in every week to exchane cultural knowledge and networking with tourists. I really enjoyed staying there during my visit. That Unplan Kagurazaka hostel is the nicest hostel I had ever stayed. And Kagurazaka isabeautiful, and quiet neighborhood but walkabe to Tokyo Dome are and many train station access to get around the rest of Tokyo. I would recommend this hostel to anyone traveling to Tokyo.
Starting from the next day, I worked in Tokyo office and met very friendly colleagues. As for this trip to Japan, my task was to make site inspections of Tokyo’s new developments in various places alone and perform valuation assignments. It wasagreat challenge for me to do inspections in suchaplace where I know nothing about routes and transportation. However, I gotasubway map and JR rail way Map (Ground Train) and my very respectful senior offeredaclear explaination of how the routes work. The maps were easy to understand and I could accomplish the inspections withinafew days. That was very good experience of my internship and I was able to observe the main commercial areas of Tokyo. I could visited about 20% of Tokyo within these two weeks.
Throughout my inspections, I had observed many high end buildings and developments of Tokyo including mix-used buildings, condominiums and offices. It was quite interesting that the buildings looked new as if they are recently built. But in fact, these have been existed for certain age yet looked amazingly new. Then, I realized the importance of building maintenance and renovation. Another interesting experience I gained from my inspection experiences was doing building inspection in Japan was quite independent and time saving. Firstly, there is public transportation available with good road accessibility to reached the destined location. Secondly, Japan is very transparent in gathering information and there are many reliable sources to make research. I think these are the advantages of real estate industry in Japan. If Yangon could be transparent in gathering information like this in the future, I strongly believe the real estate market will be more active with many foreign investments and cooperation.
Besides, I had spent many hours on trains. The trains in Japan were so clean, precise in time and no dust can be found inside. The navigated signs in every station helped me not to look likeanervous foreigner who lost her way. The train are stuck with people usually during working hours but I didn’t feel any annoyance as there were very good air conditioning and no man made noises.
During my visit in Japan, one of the many things that surprised me is the undergrounded power cables. According to Japan’s Construction and Transport Ministry, 7.3 percent of cables in Tokyo’s 23 wards were laid underground as of March 2005. Most of the cables are buried safely underground so it isalot safer than messy cables on the roads that we used to see and of cause, it does not blot outanice skyline view. Maintenance, servicing, reinstallation all could costalot and also to dig up roads and bury cables, but I think the significant purpose of making the power is less susceptible to outages during high wind thunderstorms or heavy rain. Here in Myanmar, we uses aerial cable system and if underground cables were used instead, in my opinion, we will be able to reducealot of electricity shortage whenever there is heavy rain.
Another thing is safety: Japan is well-known among travelers as the safest country in the world. I think it is because of the culture and responsible society. I heard that in Japan Education System, kids must learn manners and attitudes first when they start attending schools. If someone doesabad thing, it is shown asashame on their family name and ancestors. So, Japan is largely safe and many Japanese people tend to feel guilty in case of any mistake. Moreover, if you lose something in Japan, you are likely to get it back. The Lost and Found offices are there in every train station and Police points are in every corner of the city. As for me, I had several dinner parties with my colleagues and friends, I went back to hostel pretty late. However, the street lights were everywhere and I didn’t feel any insecurity and panic.
Nagoya City’s famous Local Noodle
Another thing I would like to describe here is foods and convenience stores. . Foods from all over the world can be found here. It is obviously expensive comparing to our foods. Nevertheless, the taste and quality are excellent. Japanese foods were delicious, fresh, healthy, clean and not so oily. No wonder why Japan has the highest life expectancy on the world’s records. They eat very healthily and like cleanliness. As for me, I used to have allergy when I eat raw fish, I tried other delicious foods rather than sushi. Convenience stores and vending machines are there in every corner of the street, so one doesn’t have to worry if thirsty or staving. But, throwing trash in Japan was quite tricky, as trash bans are organized in many separated bins. It is one of the practice what makes Japan as an incredibly clean and eco-friendly country that is super keen on recycling.
Besides, I would like to mention the manners and attitudes of Japanese people here. I was really inspired by the queuing system of Japanese people. In Japan, people do not mind how long they have to stay in line for using escalators, restaurants, stores and every public places. When the train stops at the station, those who in line give priority to those who are leaving the train. It reflected my experience of taking public transport in Yangon. Wheneveratrain shows up, instead of waiting patiently, people would push and fight against each other just to get in and get off from the train. Moreover, in Japan people never cross the red light, even if one happens to crossing the road during the red light, cars wait and shows the sign to let you go. Whatagood understanding!
Japanese people, most importantly, they are very dutiful. They can isolate their work and personal life very well. For instance, when you go toaconvenience store, the staff would greet as “welcome” or “hello” wheneveracustomer shows up at the door and “thank you” when customer is leaving. Regardless of the times they have to greet and how tiring it can be, you will only see the same hospitality and smile on their face. In my understanding, this polite behavior describes how much Japanese respect on the job that they are doing rather than they would like to show respect to the other people. Respecting on what you do is the most important thing one can keep in mind at work?
Talking about the convenience, the country is already well- developed and apparently, everything is planned to be convenience. Toilets what they called “washlets” have sensors like to keep the warm temperature and specific cleaning functions. All you have to do is not to mess up while choosing to press the buttons. On the contrary, when everything is well designed for convenience , Japanese people are seemed they are not interested to live out of the comfort zone. Asaresult of isolated country, the average Japanese can still haveagood life without speaking English. Therefore, they might think studying English is wasting their time and resulted Japanese people struggle to communicate in English. For me, I really hadahard time when I have to say something at the international airport because the staff wanted to communicate me in Japanese even though I tried to speak in English.
We all know that Myanmar is now in the rising time and it is really important to move forward without any failure. During my stay, I had learnt that Japanese people are so humble and respect to each other. Everyone takes their own responsibility and acquit it. They always follow the rules cooperatively and doing great at teamwork. Myanmar people might be better if we compare with the individual skills, however, we still need to maintain good team work skills. In order to achieve the targeted goals, it is not enough just trying to improve our individualism, we need to be united, punctual, have discipline, and respect each other. If Myanmar people could emulate them and behave like them, I believe Myanmar can be improved more systematically and advanced in human resources. The other thing I had learnt is that Japanese people are very satisfied with their lives as I mentioned above. They never think out of their comfort zone. My point is they have less eagerness for the future. This is Japan’s matureness and I don’t think it isagood fact. As Myanmar has promised future growth, everyone interests what the country’s future would be and always have hope and eagerness to get the future like we want. If we could use this passion effectively and try out the best we can, I am sure Myanmar’s future is in our hand.
At Shibuya- Sendagaya
Talking about myself, even though I worked hard in weekdays, I didn’t fail to visit Tokyo’s main attraction areas. Sometimes, my colleagues took me out after work for dinner and sometimes, for sightseeing. I also had time to spend my time wandering and observing new things alone. I could visit to Tokyo Station, Shibuya, Shinjuku, Asakusa, Akihabara, Ginza, Tokyo Dome city and Takadanobaba where many Myanmar people and Myanmar restaurants are located. My company supported me to enjoy amazing Skytree and wonderful Tokyo Disneyland. And also daytime trip to Nagoya by taking bullet train and I was able to visit Nagoya Castle and Toyota Museum. I went to the Skytree with my senior female colleagues and had unforgettable dinner on the high floor of the tower.
Epic View of Tokyo from Skytree
The epic view from the Skytree gave me the feeling I had never had in my life. And Tokyo Disneyland is so beautiful, I didn’t feel any tiredness under the hot sun because it was super fun.
Tokyo didn’t fail to amuse me in every second and I really hadagreat time.
As conclusion, that journey changedalot of my perspectives. I travelled solo but I never felt alone. My boss and colleagues took care of me and Tokyo taught mealot of things I’d never known in my life. I carriedalot of precious memories, happiness and experiences on the way back home. I was motivated, inspired and surrounded by good vibes. I don’t know if this feeling will last forever. I don’t know how long I’ll be able to slow down. But I am ready for the new challenges of the future.
တိုကျိုသို့ တစ်ကိုယ်တော် ခရီးစဉ်
ပြီးခဲ့ တဲ့ ဂျူလိုင် ၁၈ရက်နေ့ က ကျွန်မသည် တိုကျိုသို့ နှစ်ပါတ်ခန့်Internship ခရီးစဉ်ဖြင့် သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့ ပါသည်။ ထိုခရီးစဉ်က ကျွန်မရဲ့ ပထမဆုံး ပြည်ပ ခရီးစဉ် ဖြစ်တာက တစ်ကြောင်း၊ တယောက်တည်းသွားရတဲ့ ခရီးစဉ်လည်းဖြစ်တာကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှု နဲ့ပျော်ရွှင်မှု ကတော့ မဖော်ပြနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ ဒီဆောင်းပါးလေးကိုမဖတ်ခင် စာဖတ်သူကို တစ်ခုတော့သတိပေးလိုပါတယ်။ ကျွန်မ၏ဇာတိသည် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အညာဒေသပိုင်းကဖြစ်ပြီး အတိုးတက်ဆုံးနေရာဆိုလို့ကျွန်မ မြင်ဖူးသိဖူးတာကတော့ ကျွန်မအခု အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးအရ စာဖတ်သူအနေနဲ့ ဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာဟာ အနည်းငယ် ချဲ့ ကားရေးသားထားတယ်လို့  ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒါတွေဟာ တိုကျို ခရီးစဉ်အတွင်း ကျွန်မ အမှန်တကယ် ရရှိခဲ့တဲ့အတွေ့ အကြုံတွေ နဲ့ ခံစားချက်တွေဖြစ်ကြောင်း ရိုးသားစွာ ၀န်ခံလိုပါတယ်ရှင်။
ကျွန်မသည် Narita လေဆိပ်ကို ဂျူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့ မနက်စောစောမှာ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ လေဆိပ်ကနေ စထွက်ထွက်ခြင်းပဲ တိုကျိုမြို့ တော်ရဲ့သန့် ရှင်းမှုနဲ့ တိတ်ဆိတ်မှုကို ကျွန်မ စတင်ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက တိုကျိုမှာ နွေရာသီ ဖြစ်နေပေမယ့်လည်း လေထုညစ်ညမ်းမှု သိပ်မရှိလို့ ကျွန်မအတွက်တော့ သာယာတဲ့ ရာသီဥတုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ထို့နောက် ကျွန်မ Limousine ဘတ်စကား ၀န်ဆောင်မှုကနေ လက်မှတ်ဝယ်ပြီး ကျွန်မ သူဌေးက ကျွန်မလာရင်တည်းဖို့ကြိုတင် ဘိုကင်လုပ်ထားတဲ့ UNPLAN KAGURAZAKA ဆိုတဲ့ အဆောင် ကို သွားခဲ့ ပါတယ်။ ဘတ်စ်ကားစစီးလာတဲ့ က သတိထားမိတာကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အချိန်တိကျမှု ပါပဲ။ ဘတ်စကာက မှတ်တိုင်မှာပြထားတဲ့ အချိန်အတိုင်းကွက်တိ ရောက်လာပြီး ကျွန်မဆင်းမယ့်နေရာကိုလည်း သူတို ဖော်ပြထားတဲ့ အချိန်နီးပါးရောက်ပါတယ်။ ပြောချင်တာကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံက ဖြောင့်ဖြူး သန့်ရှင်းနေတဲ့လမ်းတွေနဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး လမ်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်နိုင်ခြေ အရမ်းနည်းပါတယ်။ ကျွန်မစီးလာတဲ့ ဘတ်စကားကတော့ ကား ဒရိုက်ဘာ တယောက်ပဲ ပါပြီး သီချင်းနားထောင်နေရင်တောင် နားကြပ်ထဲအသံ အပြင်ကို ထွက်မလာအောင် သတိထားရပါတယ်။ အဆောင်ကိုသွားနေတဲ့ လမ်းတလျောက်လုံးမှာ တိုကျိုရဲ့ ထင်ကရနေရာတွေနဲ့ ရင်သတ်ရှုမောဖွယ်မြို့ပြရဲ့ အလှကို ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ တိုကျိုဟာ ကမ္ဘာ့အထင်ကရမြို့ ကြီးထဲက တစ်ခုဖြစ်ပြီး တိုကျို နယ်နိမိတ် တစ်ခုလုံး အနေနဲ့လူဦးရေ ၃၆ သန်းရှိပြီး တိုကျိုပြည်နယ် အနေနဲ့ကတော့ လူဦးရေ ၁၄သန်းခန့်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း တိုကျိုဟာ အရမ်းကို ခေတ်မီတိုးတက်ပြီး အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့လူတွေနဲ့ ပြည့်ကျပ်နေပါတယ်။ ထူးဆန်းတာတစ်ခုကတော့ ကျွန်မတို့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ လမ်းဘေး ခွေးတစ်ကောင်မှမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ နောက်တစ်ခုသတိထားမိတာကတော့ လူတွေကဟာ လူသွားလမ်း ပလက်ဖေါင်းပေါ်မှာပဲအေးဆေးစွာလမ်းလျောက်ကြပါတယ်။ အဲ့ ဒါဟာ ကျွန်မကို အံ့အားသင့်စေတယ် ဘယ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့ဆီက လူသွားလမ်းတွေမှာ ပျံကျဈေးသည်တွေ ကိုယ်ပိုင်ကားတွေက အပြည့်နေရာယူထားတော့ အန္တရာယ်များပေမယ့်လည်း လူတွေက လမ်းမပေါ်တက်လျှောက်ကြရတယ်လေ။
ဒီလိုနဲ့ ပဲ တစ်နာရီခွဲလောက်ကြာတော့ ကျွန်မတည်းမယ့် အဆောင်ကိုရောက်လာခဲ့ တယ်။ အဲ့ အဆောင်ဟာ ကျွန်မမျှော်လင့်မထားရလောက်အောင်ကို သန့် ရှင်းသပ်ရပ်နေခဲ့တယ်။ အဆောက်အဦးရဲ့ တည်ဆောက်ထားပုံက အရမ်းသပ်ရပ်လှပပြီး ရေချိုးခန်းတွေက သက်တောင့်သက်သာရှိ အောင် သေချာ ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး ဆောက်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ အဆောင်ဝန်ထမ်းတွေက အရမ်းထူးချွန်ပြီး ဖော်ရွေကြတယ်။ သူတို့မသိရင်တောင်မှ အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီး Customerတွေမေးလာသမျှကို စိတ်ရှည်ရှည်ရှင်းပြကြတာတွေ့ ရတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့က အင်္ဂလိပ်စကားကို ခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစင်ပြောနိုင်တယ်။ အဆောင်ရဲ့ မြေညီထပ်ကတော့ ကဖေးဖြစ်ပြီး အပေါ်အထပ်တွေကတော့ အလည်လာသူတွေ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက် အဆောင်နေရာတွေဖြစ်တယ်။ အဆောင်အခန်းတွေက အရမ်းသန့် ရှင်းပြီး အိပ်ရာခင်းတွေက အနံ့ အသက် အရမ်းကောင်းတယ် တစ်ခန်းကို လူ၁၄ယောက် စာ ဆန့်တယ်ပြီး တစ်ခန်းကို နှစ်ထပ်အိပ်ကုတင် ၇လုံး ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မနေခဲ့ တဲ့ နှစ်ပါတ်လုံးတော့ အခန်းဖော်တွေရဲ့ ဆူညံသံဆိုတာလုံးဝမကြားခဲ့ ရဘူး။ သူတို့ ကတော့အဆောင်လို့ ပြောပေမယ့်လည်း မနက်စာ ကျွေးတဲ့ အပြင် ရေချိုးဆပ်ပြာ ခေါင်းလျှော်ရည် Conditioner ကအစ ဆံပင် ခြောက်စက် (Hair Dryer) အဆုံး ရေချိုးခန်းတိုင်းမှာ ထည့်ပေးထားတယ်။ ရေချိုးခန်းတွေက အရမ်းကို သန့်ရှင်းနေပြီးတော့ အဆောင်ရဲ့အများသုံးထမင်းစားခန်းတွေက အလွန်ကျေနပ်စရာကောင်းလှအောင်ကို ပြင်ဆင်ထားတာတွေ့ရတယ်။ ရေခဲသေတ္တာ၊ မိုက်ခရိုဝေ့ နဲ့ တခြားလိုအပ်တဲ့ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတွေထားပေးထားတယ်။ ပြီးတော့ အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ ကိုယ့်ဘာကိုယ်စားစရာသောက်စရာတွေသယ်သွားပြီး အပန်းဖြေနိုင်တဲ့ပေါတီကိုလေးလည်းပါသေးတယ်။ တခြား ခရီးသွားဖော်တွေနဲ့ အတူတူ ဆင်နွှဲနိုင်မည့် Events တွေ ပျော်စရာတွေကလည်း အပါတ်တိုင်းလိုလို ရှိတယ်။ ပြီးတော့ အချိန်ရမယ်ဆိုရင် ဧည့်ခန်းမှာ တီဗွီပဲကြည့်မလား စာအုပ်ပဲဖတ်မလား ဂိမ်းပဲကစားမလား အကုန်လုပ်လို့ရတယ်။ အဲဒီအဆောင်မှာတည်းရတာ တကယ့်ကို စိတ်ချမ်းသာခဲ့ရတယ်။ ကျွန်မနေဖူးတဲ့ အဆောင်တွေထဲမှာ တော့ UNPLAN KAGURAZAKA ဆိုတဲ့ အဆောင်က အကောင်းဆုံးပဲ။ KAGURAZAKA ရပ်ကွက်ကလည်းအလွန် လှပပြီး တိတ်ဆိတ်တယ်။ မြို့ လည်ခေါင်ဖြစ်တဲ့ TOKYO DOME ကိုလည်း လမ်းလျှောက်သွားလို့ ရပြီး တိုကျိုရဲ့ ကျန်တဲ့ နေရာတွေကိုလည်း ရောက်နိုင်မည့် ရထားလမ်းကြောင်းတွေ ရှိတယ်။ တိုကျိုကို ခရီးသွားဖို့ စဉ်းစားထားတယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ အဆောင်မှာ တည်းဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့ကစပြီးတော့ ကျွန်မ ရုံးစတက်ပြီးတော့ အရမ်းဖော်ရွေတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ တွေ့ခွင့်ရခဲ့ ပါတယ်။ ဒီတခေါက်ခရီးစဉ်မှာ ကျွန်မလုပ်ရမယ့် အဓိကတာဝန်ကတော့ တိုကျိုရဲ့ စီးပွားရေး အချက်အချာကျတဲ့ နေရာအသီးသီးမှာရှိတဲ့ ဖွံဖြိုး တိုးတက်နေတဲ့အဆောက်အအဦးအသစ်တွေကို လေ့လာရေးဆင်းပြီး တန်ဖိုးဖြတ်တဲ့Assignment တွေ ရေးပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို နေရာဒေသအသစ် လမ်းကြောင်းအသစ်တွေနဲ့ ဘာမှမရင်းနှီးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်ဖို့ဆိုတာ ကျွန်မအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း တိုကျိုရဲ့ မြေအောက်ရထားမြေပုံနဲ့ JR လို့ ခေါ်တဲ့ မီးရထားမြေပုံတွေကို ပြရင်း ကျွန်မလေးစားရတဲ့ ကျွန်မရဲ့ စီနီယာက အဲ့ လမ်းကြောင်းတွေဘယ်လို အလုပ်လုပ်တယ် ချိတ်ဆက်ထားတယ်ဆိုတာကို သေချာရှင်းပြခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီမြေပုံတွေက ကျွန်မအတွက် တော်တော် အသုံးဝင်တယ်ပြောရမယ်။ ကျွန်မတစ်ရက်ထဲမှာပဲ တိုကျိုရဲ့ ရထားလမ်းကြောင်းတွေကို တော်တော်နားလည်သွားတယ်။ နောက်နေ့ ကစပြီး တော့ ကျွန်မရဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေကို ရက်အနည်းငယ်အတွင်းအပြီး သတ်နိုင်ရန် ကိုယ်ပါကိုယ် အစီအစဉ်စွဲပြီး သွားရောက်လေ့လာခဲ့ ပါတယ်။ ဒါဟာ ဒီ internship ရဲ့အရမ်းကောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပြီး နှစ်ပါတ်အတွင်းမှာ တိုကျိုရဲ့ ၂၀ရာခိုင်နုန်းလောက်ကို ကျွန်မရောက်ခဲ့ ပါတယ်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်နေစဉ် တလျောက်လုံး ကျွန်မ တိုကျိုရဲ့ တန်ဖိုးမြင့် အဆောက်အဦးတွေ ရှော့ပင်းမောတွေ mixed used အဆောက်အဦးတွေ ကွန်ဒိုတွေနဲ့ ရုံးအဆောက်အဦးတွေကို လေ့ လာခွင့်ရခဲ့ ပါတယ်။ အဆောက်အဦးတွေဟာ မနေ့ တနေ့ ကမှ ပေါ်လာတဲ့ အတိုင်း အရမ်းကို သစ်လွင် ခမ်းနားနေတာကတော့ တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ အမှန်တော့ အဲဒီအဆောက်အဦးတွေမှာ သူ့ သက်တမ်းနဲ့ သူ ရှိပြီး ဆောက်ထားသည့်ကာလမှာ အလွန်ကြာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ အဆောက်အအုံတွေကို ထိန်းသိန်းမှု နဲ့ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုရဲ့  အရေးပါပုံကို ကျွန်မသဘောပေါက်လိုက်တယ်။ နောက်တချက် ကျွန်မ သတိထားမိတာကတော့ ဂျပန်မှာ အဆောက်အဦးတွေကို အကဲဖြတ်စစ်ဆေးရေးလုပ်ရတာ အတော်လေးကို အချိန်ကုန်သက်သာပြီး စိတ်ပေ့ါပါးလွတ်လပ်ပါတယ်။ ပထမတစ်ခုပြောချင်တာကတော့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးစနစ်ပါ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး တအားကောင်းတော့ကျွန်မသွားချင်တဲ့ နေရာတွေကို အချိန်မှီ တိတိကျကျရောက်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်ကတော့ ဂျပန်ဟာ အိမ်ခြံမြေ သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး အလွန်ကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပါတယ်။ ကိုယ်လိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ကို စုဆောင်းမှတ်သားနိုင်ဖို့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့Media Resources တွေအများကြီးရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။ တကယ်လို့ အနာဂါတ်မှာ ရန်ကုန် အိမ်ခြံမြေ လုပ်ငန်းဟာ ဒီထက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိမယ်ဆိုရင် မြန်မာ့အိမ်ခြံမြေဈေးကွက် ဟာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုတွေ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ ဒီထက်ပိုပြီး အသက်ဝင်လာမယ်လို့ ကျွန်မယုံကြည်တယ်။
ဂျပန်မှာ နေခဲ့သမျှ နေရက်တွေ များသလောက် ကျွန်မရဲ့ အချိန်တော်တော်များများဟာ ရထားပေါ်မှာ ကုန်ဆုံးပါတယ်။ ဂျပန်ကရထားတွေက အရမ်းသန့်ရှင်းပြီး အချိန်အင်မတန်မှ တိကျပါတယ်။ ရထားထဲမှာ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကို ဖုန်တစက်မှ ရှိမနေတာ တွေ့ရတယ်။ ရထားတခါရပ်တိုင်း ဆင်းရမယ့်ဘူတာ တွေကို ဖော်ပြပေးနေတော့ စိတ်အေးလက်အေးပဲ ရထားစီးခဲ့ရတယ်။ ဒါပေါ့ ကျွန်မကလည်း လမ်းပျောက်နေ တဲ့နိုင်ငံခြားသားတယောက် ပုံစံပေါက်မနေချင်ဘူးလေ။ အဲ့ဒါကြောင့် အေးဆေးထိုင်ပြီး ဂျပန်လူမျိုးတွေလိုနားကြပ်တပ်ပြီး သီချင်း နားထောင်နေလိုက်တယ်။ ဂျပန်က မီးရထား လမ်းစနစ်တွေက အတော်လေးကို အဆင်ပြေတာ တွေ့ရတယ်။ ရထားထဲမှာလည်း အဲကွန်းလေ ကောင်းကောင်းရတယ် ပြီးတော့ ခရီးသည်တွေက စကားကျယ်ကျယ်မပြောကြဘူး တဖက်သားအနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင် ကျယ်လှောင်စွာ ဖုန်း ဆက်တာတွေပါတွေလည်း မလုပ်တာတွေ့ ရတယ်။
ကျွန်မဂျပန်ခရီးစဉ်အတွင်း ကျွန်မကို အံ့အားသင့်စေတာကတော့ မြေအောက် လျှပ်စစ်ကြေးနန်းကြိုးတွေပဲ။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန အရ တိုကျိုရဲ့၂၃ မြို့ နယ်လောက်က လျှပ်စစ်မီးကို မြေအောက်က သွယ်ယူစနစ်နဲ့ အသုံးပြုတာတွေ့ ရတယ်။ ကြေးနန်းကြိုး အများစုကို ၂၀၀၅ခုနှစ် မတ်လပိုင်းကစပြီး မြေအောက်မှာ မြှုပ်နှံခဲ့တာဖြစ်တယ်။ မြေအောက်မှာ စနစ်တကျမြှုပ်နှံထားတဲ့ ကြေးနန်းကြိုးတွေဟာ ကျွန်မတို့ မြင်နေကျဖြစ်တဲ့ လမ်းပေါ်က ဓာတ်တိုင်တွေ ဓာတ်ကြိုးတွေထက် အများကြီး အန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ မြို့ ပြရဲ့  အလှကိုလည်း မဖျက်တော့ဘူးပေါ့။ ထိန်းသိမ်းစရိတ်တွေ တပ်ဆင်ခတွေ ၀န်ဆောင်မှု ၊ လမ်းတွေကို တူး ပြီး ဓာတ်ကြိုးတွေကိုမြှုပ်ရတာဆိုတော့ တော်တော်လေးကုန်ကျနိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့်လည်း သူ့ရဲ့ သိသာထင်ရှားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ လေမုန်တိုင်းတိုက်တာမျိုး မိုးကြီးလေကြီး ကျတာမျိုးဆိုရင် တော်ရုံတော်ရုံ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပျက်တောက်တာမျိုး မဖြစ်နိုင်အောင်လို့ ပေါ့နော်။ ကျွန်မထင်တယ် ကျွန်မတို့ ဆီမှာသာ ဒီစနစ်ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ဘာမဟုတ်တဲ့ မိုးလေးရွာတိုင်းမီး ခဏခဏ ပျက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ ။
နောက်တစ်ခုကတော့ ဘေးကင်းမှုပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာမှာ ဘေးအန္တာရာယ် အကင်းဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား တွေကြားမှာ ကျော်ကြားပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ အဲ့ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ တာဝန်ယူတတ်တဲ့ လူ့ အဖွဲ့ အစည်းကြောင့်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဂျပန်ရဲ့ ပညာရေးစနစ်မှာ ကလေးငယ်လေးတွေ ကျောင်းစတက်ပြီဆိုရင် စည်းကမ်း အမူအကျင့် နဲ့ သဘောထား တွေကို အရင်ဆုံး သင်ကြားပေးတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။ တကယ်လို့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကသာ မကောင်းတဲ့ အရာတစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင် သူတို့  မိသားစုအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ ဆွေစဉ်မျိုးဆက်အတွက် ပါအရှက် ရစရာဖြစ်တယ်လို့ သူတို့ ယုံကြည်ကြတယ်။ အဲ့ ဒါကြောင့်လည်း ဂျပန်ဟာ အလွန်စိတ်ချရတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီး လူတွေက ဘယ်လို အမှားမျိုးမလို ကျူးလွန်ဖို့ ဝန်လေးကြတယ်။ ဒါအပြင် ဂျပန်မှာ ပစ္စည်းတစ်ခုခု ပျောက်ပြီးဆိုရင် ပြန်ရဖို့ အခွင့်အရေးများပါတယ်။ Lost & Found ရုံးတွေဟာ ဘူတာတိုင်းမှာလိုလိုရှိပြီး ရဲစခန်းတွေကလည်း မြို့ရဲ့ထောင့်တိုင်းမှာရှိနေပါတယ်။ ကျွန်မအတွက်ကတော့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ညတိုင်းလိုလို ညစာစားပွဲတွေသွားပြီး အဆောင်ပြန်ချိန် ခဏခဏ ညည့်နက်ပေမယ့်လည်း လမ်းမီးတွေက နေရာတိုင်းမှာလင်းထိန်နေတဲ့ အတွက် စိတ်မလုံခြုံမှုတွေ ကြောက်စိတ်တွေပါတွေတောင်မရှိခဲ့ ပါဘူး။
နောက်တစ်ချက်ပြောချင်တာကတော့ အစားအသောက်နဲ့ Convenience စတိုးတွေပါ။ တကမ္ဘာလုံးက အစားအစာမှန်သမျှ ဂျပန်မှာ ရနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့အစားအစာတွေနဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ ဈေးများတာပေ့ါ။ သို့ပေမယ့်လည်း အရသာနဲ့ကွာလတီကတော့ လုံးဝကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဂျပန်အစားအစာတွေဟာ အရမ်း လတ်ဆတ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ လည်း ညီညွတ်ပြီး အရမ်းအရသာရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆီသိပ်မပါပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ဂျပန်လူမျိုး တွေဟာ ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်းမှာ အသက်အရှည်ဆုံး လူတွေဖြစ်နေတာ မထူးဆန်းမိတော့ပါဘူး။ သူတို့က တကယ့်ကို ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စွာစားပြီး အသန့်အပြန့် အလွန်ကြိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ အသားငါးတွေကို အစိမ်းစားရင် Allegic ဖြစ်တတ်လို့ဆူရှီကလွဲလို့ တခြား အရသာရှိတဲ့ ဂျပန်အစားအစာတွေကို စားခဲ့ရပါတယ်။ Convenience စတိုးတွေနဲ့ အလိုအလျောက် ဈေးရောင်းစက်တွေ ကနေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့အတွက် ရေငတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဗိုက်ဆာတာပဲဖြစ်ဖြစ် ပူစရာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ်လည်း အမှိုက်ပစ်ခါနီးရင်တော့ ကိုယ်ပစ်မယ့်အမှိုက်ဟာ ဘာ အမျိုးအစားလည်းဆိုတာ အရင်ဆုံးစဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်။ မီးဖိုချောင်ကထွက်တဲ့အမှိုက်လား ပလက်စတစ်လား သတင်းစာလိုမျိုးrecycle လုပ်လို့ရတဲ့ အမှိုက်လားစသဖြင့်ပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အမှိုက်ပစ်ရမယ့်နေရာမှာသူ့ အမျိုးအစားနဲ့ သူ ခွဲခြားထားတဲ့ အမှိုက်ပုံးတွေ အများကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး အမှိုက်ကို ခွဲခြားပြီး ပစ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွေ့အကြုံတွေအရ ဂျပန်ဟာ တော်တော်လေးသန့် ရှင်းပြီး Recycling အတွက် အလွန်စိတ်အားထန်သန်တဲ့Eco-Friendly နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ် လို့ ယူဆမိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဂျပန်လူမျိုးတွေတဲ့စည်းကမ်း ထိန်းသိန်းမှု နဲ့ သဘောထားကိုလည်းဖော်ပြချင်ပါသေးတယ်။ ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့တန်းစီတဲ့အကျင့်ကို ကျွန်မတော်တော်လေး လေးစားမိပါတယ်။ သူတို့ဘယ်လောက်ပဲအလုပ်ရှုပ်နေပါစေ သူတို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုတန်းစီဖို့ ၀န်မလေးကြဘူး။ ဘူတာမှာဆိုရင် ရထားရပ်တာနဲ့ ရထားပေါ်က စင်းရမယ့်လူတွေက ပထမ ဦးစားပေးဖြစ်ပြီး အဲဒီလူတွေအကုန်ထွက်မသွားမချင်း နောက်တက်မည့်လူတွေဟာ တက်ညီလက်ညီ တန်းစီပြီး စောင့်ကြပါတယ်။ ရန်ကုန်ှမှာ ကျွန်မ က ရထားစီးလေ့ရှိတာကြောင့် ရထားလာတာတဲ့ အခါတိုင်း ဆင်းတဲ့ လူတွေရော တက်မယ့်လူတွေရော လုယက်တိုးဝှေ့ နေကြတဲ့ မြင်ကွင်းက အာရုံထဲ ပေါ်လာတော့ နည်းနည်းတော့စိတ်မကောင်ဖြစ်မိတယ်။ ဂျပန်မှာ လမ်းတိုင်းလိုလိုမှာ လမ်းကျဉ်းလေးပါမကျန် လူကူးမျဉ်းကျားတွေ ရှိပါတယ်။ ပြီးရင် ဒီကလူတွေက မီးနီမှာ လမ်းဖြတ်မကူးကြပါဘူး။ အကယ်ရွေ့ကူးမိသွားတယ်ဆိုရင်တောင် ဖြတ်သွားရမယ့်ကားကရပ်ပြီး ဆက်သွားဖို့စောင့်ပြီး အချက်ပြပါတယ်။ ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်တဲ့ နားလည်မှုလဲ။
ဂျပန်လူမျိုးတွေ အများစုကတော့ အရမ်းတာဝန်ကျေကြတယ်။ သူတို့က ကိုယ်ပိုင်ဘ၀နဲ့ အလုပ်ကို ကောင်းကောင်း ခွဲခြားထားနိုင်တယ်။ ဥပမာဆိုရင်- Convenience စတိုးတစ်ခုထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ အရောင်းကောင်တာ က၀န်ထမ်းတွေက “မင်္ဂလာပါ” “ကြိုဆိုပါတယ်” စတဲ့ နှုတ်ဆက်စကားတွေကို အပြုံးမပျက်ပြောပါတယ် ၀ယ်ပြီးသွားရင်လည်”းကျေးဇူးတင်ပါတယ်”ကို ဈေးဝယ်လာတဲ့ သူအား တလေးတစားပြောတယ်။ အ၀ယ် ကြိုက်သလောက်လာ မျက်နှာတစ်ချက်မပျက်ဘူး အချင်းချင်းလည်း အလုပ်နဲ့ မဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာ တွေ စကားပြောနေတာတွေမတွေ့ခဲ့ရဘူး။ ကျွန်မကတော့ ဒါဟာ သူတို့ တခြားလူကို လေးစာမှုပြနေတာထက် သူတို့ လုပ်တဲ့ အလုပ်ကို တလေးတစားလုပ်နေတယ်လို့ ပဲမြင်မိတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်မတို့ အလုပ်လုပ်တိုင်း စိတ်ထဲမှာထည့်ထားသင့်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲမဟုတ်ဘူးလား။
အဆင်ပြေမှုအကြောင်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး နိုင်ငံတစ်ခုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ အရာအားလုံးကို ပြည်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေချောမွေ့အောင် လုပ်ထားတာ ကိုတွေ့ရတယ်။ Washlets လို့ ခေါ်တဲ့အိမ်သာ တွေကို ဂျပန်မှာအသုံးများပြီး အိမ်သာတခါး စဖွင့်လိုက်တာနဲ့ sensor အလိုလိုပွင့်ပြီး အိမ်သာက သူ့ ပါသူ အရင်ဆုံးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကိုယ့်ကိစ္စကိုရှင်းဖို့အတွက်လည်း ပေးထားတဲ့ ခလုပ်တွေ နှိပ်ပေးရုံပဲ။ ပြောရဲတယ် အဲဒီလို အိမ်သာမျိုးသုံးပြီးသွားရင် ရိုးရိုးအိမ်သာတောင်ပြန်သုံးချင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ အဲဒီလို အစစအရာရာကို အဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားတဲ့အတွက် ကျွန်မအမြင်အရ အားနည်းချက်ကတော့ ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အဆင်ပြေနေတဲ့ အခြေအနေတွေကနေ ကျော်ပြီးမစဉ်းစားတာကိုတွေ့ရတယ်။ သီးခြား အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ သာမန်ဂျပန်လူမျိုးတယောက်က အင်္ဂလိပ်လို မပြောတတ်လည်း ကောင်းမွန်တဲ့ ဘ၀တစ်ခု အေးအေးဆေးဆေးရနိုင်တယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း သူတို့တွေဟာ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့အတော် ခဲရင်းကြတယ်။ သူ့တို့ အတွက် အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတယ်ဆိုတာ အချိန်ဖြုန်းခြင်းတစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ နိုင်ငံတကာလေဆိပ်လိုနေရာမျိုးမှာ တောင် လေဆိပ်က၀န်ထမ်းတွေကို နားလည်မှုလွဲမှာဆိုးလို့ သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ကျွန်မ အင်္ဂလိပ်လိုမေးခဲ့ပေမယ့်လည်း သူတို့ က ဂျပန်လိုပဲ ပြန်ဖြေနေတာကိုတွေ့ရတယ်။
ကျွန်မဒါတွေကို ရေးရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ ကျွန်မရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ အတွေးတွေကို ဝေမျှချင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်း ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေပြီး အမှားအယွင်းကင်းကင်းနဲ့ ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့ အင်မတန်မှ အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်မဂျပန်မှာနေခဲ့ တဲ့ တလျှောက်လုံးမှာ ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ မိမိကိုယ်ကို နှိမ်ချတတ်တဲ့ စိတ်၊ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး အပြန်အလှန် လေးစားမှုရှိတာတွေကို တွေ့ခဲ့ရတယ်။ လူတိုင်းလိုလို ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ် ကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်တယ်။ စည်းကမ်းတွေကို တက်ညီလက်ညီလိုက်နာကြ ပြီး အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ အင်မတန်တော်ကြတယ်။ ကျွန်မတို့မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ တစ်ဦးချင်းစီ အရည်အချင်းကိုကြည့်ရင် ကျွန်မတို့ကသာကောင်းသာနိုင်ပါတယ် သို့သော်လည်း အဖွဲ့အစည်းနဲ့အောင်မြင် အောင်တက်ညီလက်ညီမခိုမကပ်ဘဲ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် အရည်အသွေးကောင်းတွေတော့လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ Teamwork ဆိုတာ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့လုပ်ဆောင်မှုနဲ့မျှော်မှန်းထားတဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို ရောက်တဲ့အထိ တက်ညီလက်ညီဆောင်ရွက်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်။ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့အတွက် ကြိုးစားလျှောက်လှမ်းနေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းတွေပဲကောင်းနေရုံနဲ့ မရပါဘူး။ ကျွန်မတို့စည်းလုံးကြရမယ်။ စည်းကမ်းရှိရမယ်။ အချိန်ကို လေးစားရမယ်။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးလေးစားမှုရှိရှမယ်။ ကျွန်မတို့ သာ သူတို့ ဆီက ဒီအကျင့်စရိုက်လေးတွေကို အတုယုပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ လူတွေရဲ့ အဆင့်အတန်းမြင့်မားပြီး စနစ်တကျ တိုးတက်မယ်လို့ ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။ အခြားတစ်ခု ကျွန်မသတိထားမိတာကတော့ ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ သူတို့ရဲ့လက်ရှိ ဘ၀အခြေအနေကို ကျေနပ်နေကြပြီး အနာဂါတ်အတွက် စိတ်ဝင်စားမှု စိတ်အားထက်သန်မှု သိပ်မရှိတာတွေ့ရတယ်။ ပြောချင်တာကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အလျောက် နိုင်ငံက လူတွေက လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ရောင့်ရဲ တင်းတိမ်ကြတယ်။ ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံကတော့ ကတိပေးထားတဲ့ အနာဂါတ်တွေ ရှိတဲ့ အတွက် ရှေ့ဆက်ပြီး ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို လူတိုင်းလိုလို စိတ်ဝင်တစားရှိကြတယ်။ လူတိုင်းမှာ မျော်လင့်ချက်တွေ ၊ ပြင်းပြတဲ့ စိတ်ဆန္ဒတွေရှိကြတယ်။ အဲ့ ဒီ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေကို ကောင်းကောင်းအသုံးချပြီး အကောင်းဆုံးကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ လိုချင်တဲ့ နိုင်ငံရဲ့ အနာဂါတ်က ကိုယ့််လက်ထဲမှာ လို့ ကျွန်မယုံကြည်တယ်။
ကျွန်မအကြောင်းကိုဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီနှစ်ပါတ်အတွင်း ရုံးဖွင့်ရက်တွေမှာ ကျွန်မ ရုံးတက်ပြီး အလုပ်ကြိုးစားလုပ်တယ်။ အားတဲ့ရက်တွေမှာတော့ တိုကျိုအနှံ့ ကျွန်မသွားချင်တဲ့နေရာတွေကို ရောက်အောင်သွားခဲ့တယ်။ တစ်ခါတလေ ကျွန်မရဲ့ စီနီယာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက ညစာလိုက်ကျွေးရင်းဖြစ်ဖြစ် လျှောက်လည်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဂရုတစိုက်လိုက်ပို့ကြတယ်။ တခြားကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေမှာတော့ တယောက်တည်း အသစ်အဆန်းတွေ လေ့လာရင်း တယောက်တည်းရောက်တက်ရာရာ လျောက်သွားခဲ့ တယ်။ သမိုင်းဝင် Tokyo Station, Shibuya, Shinjuku, Asakusa, Akihabara, Ginza, Tokyo Dome city နဲ့ မြန်မာတွေ အများဆုံးနေထိုင်ကြပြီး မြန်မာစားသောက်ဆိုင်တွေ ရှိတဲ့ Takadanobaba ရောက်ခဲ့ တယ်။ ကျွန်မ ကို ကုမ္ပဏီက Skytree သွားဖို့ နဲ့Tokyo Disneyland သွားဖို့ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ တယ်။ ပြီး တော့ Nagoya ရဲတိုက်နဲ့ Toyota ပြတိုက်ရှိတဲ့Nagoya မြို့တော်ကိုလည်း ကျည်ဆန်ရထားနဲ့ လည်ပတ်ခွင့် တစ်ရက်ရခဲ့တယ်။ Skytree အပေါ်ဆုံးအထပ်ကနေ တိုကျိုတစ်ခုလုံးကို မြင်ရတာဟာ ဘ၀မှာ တစ်ခါမှ မခံစားဖူးတဲ့ ခံစားချက်မျိုးရရှိခဲ့တယ်။ Skyetree ရဲ့ အထပ်မြင့်မှာ ကုမ္ပဏီက စီနီယာမိန်းကလေးအဖွဲ့ နဲ့ညစာအတူတူ စားခဲ့ပြီး ပျော်စရာ အချိန်လေးတစ်ခု ရရှိခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ Tokyo Disneyland မှာ နေအရမ်းပူနေတာတောင် မပင်ပန်းနိုင်အောင် အရမ်းပျော်စရာကောင်းခဲ့ တဲ့ အမှတ်တရတွေ ရရှိခဲ့ တယ်။
နိဂုံးချုပ်နေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ ဒီခရီးစဉ်က ကျွန်မရဲ့ အတွေးအမြင်တော်တော်များများကို ဆန်းသစ်စေခဲ့ တယ်။ ကျွန်မတစ်ယောက်တည်း ခရီးသွားခဲ့တယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်မအထီးကျန်တယ်လို့ လုံးဝမခံစားခဲ့ ရဘူး။ ကျွန်မရဲ့ သူဌေးနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက ကျွန်မကိုအရမ်းဂရုစိုက်ကြပြီး တိုကျိူက ကျွန်မဘ၀မှာ မကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာအသစ်တွေအများကြီးကို သင်ကြားပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်မရဲ့အိမ်ပြန်လမ်းဟာ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အမှတ်တရတွေ ပျော်ရွင်မှုတွေ နဲ့ ပြည့်နေခဲ့ တယ်။ ကျွန်မဟာ ရှေ့ဆက်ရမယ့်လမ်းအတွက် အတွေးအမြင်အသစ်တွေ အင်အားအသစ်တွေရှရှိခဲ့ ပြီဖြစ်တယ်။ ဒီခံစားချက်ဟာ အမြဲ တည်မြဲမလား တော့ ကျွန်မမသိဘူး။ ဘယ်အချိန်မှာ အရှိန်ရပ်သွားမလဲ ဆိုတာလည်း ကျွန်မ မပြောနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မက အနာဂါတ်ရဲ့ စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာတော့ သေချာတယ်။ ကျွန်မဟာ ဘ၀မှာ ဖြစ်ချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကို သတ်မှတ်ထားလေ့ရှိတယ်။ အဲ့ ထဲက အရမ်း ဖြစ်ချင်တဲ့ တစ်ခုတော့ ပြည့်ဝ သွားပြီ။ ဟုတ်တယ် အဲ့ ဒါက တိုကျိုကို တစ်ကိုယ်တော် ခရီးထွက်ခြင်းပဲ။
Previous PostPrevious Solo To Tokyo
Next PostNext What’s happening in Myanmar Market and Valuation? Volume 10